Enthalpy: ihe ọ bụ, njirimara na mmeghachi omume kemịkal | Netwọk Mgbasa Ozi
Na physics na kemistri, a na-eji echiche iji tụọ ike dị n'ime ahụ. Anyị na-ekwu okwu banyere kechie. Ọ bụ ụdị mmesho na-egosi oke ike dị na ahụ ma ọ bụ sistemụ nke nwere obere olu, nke nọ na nrụgide na enwere ike ịgbanwere ya na gburugburu ebe obibi. A na - anọchi anya enthalpy nke usoro site na leta H na akụkụ anụ ahụ metụtara ya iji gosipụta ike ike bụ Joule.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na mkpa nke enthalpy.
1 Isi atụmatụ
2 Formation enthalpy
3 Enthalpy nke mmeghachi omume
4 Mmekọrịta na okpomọkụ
Anyị nwere ike ikwu na enthalpy hà nhata nke ike dị n'ime ya nke sistemụ gbakwunyere ugboro nrụgide olu nke otu sistemụ ahụ. Mgbe anyị hụrụ na ike nke sistemụ, nrụgide na olu bụ ọrụ nke steeti, enthalpy bụkwa. Nke a pụtara na, mgbe oge ruru, ọ nwere ike ime na ụfọdụ ọnọdụ izizi ikpeazụ ka onye agbanwe ahụ wee nwee ike nyere aka ịmụ usoro ihe niile.
Ihe mbu bu ima ihe bu ihe aru ike. Ọ gbasara etinye obi gị dum okpomọkụ echefuru usoro mgbe 1 ahumachi nke ngwaahịa umi na-emepụta site na ọcha na nkịtị ala. Steeti ndị a nwere ike ịbụ ihe siri ike, mmiri mmiri ma ọ bụ ikuku ma ọ bụ ihe ngwọta. Ọnọdụ e nyere ala bụ ọnọdụ kacha kwụrụ chịm. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ kachasị akwụ ụgwọ nke carbon nwere bụ eserese, na mgbakwunye na ịnọ n'ọnọdụ nkịtị nke ụkpụrụ ịda mbà n'obi bụ 1 ikuku na ọnọdụ okpomọkụ bụ ogo 25.
Anyị na-ekwusi ike na ọnụọgụ nke kpụworo dịka ihe anyị kọwapụtara si bụrụ 1 ahịhịa nke mepụtara. N'ụzọ dị otú a, dabere na ọnụọgụ nke ngwaahịa reagent dị ugbu a, a ga-agbanwe mmeghachi omume ya na ọnụọgụ ọnụọgụ.
Anyị maara na n'ime usoro kemịkalụ ọ bụla, ọnya nke etolite nwere ike ịbụ nke ọma na nke adịghị mma. Nke a enthalpy bụ ihe dị mma mgbe mmeghachi omume bụ endothermic. Na mmeghachi omume nke kemịkal pụtara na ọ nwere ike ịmị ọkụ nke ọkara. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị nwere adịghị mma enthalpy mgbe mmeghachi omume bụ exothermic. Na mmeghachi omume nke kemịkal pụtara na ọ na-ewepụta okpomọkụ site na sistemụ ahụ gaa n'èzí.
Maka mmeghachi omume na-apụ apụ, ndị ahụ ga-enwerịrị ike karịa ngwaahịa ndị ahụ. N'aka ozo, maka mmeghachi omume na-ekpo ọkụ nke ga-eme ka ndị na-eme ihe ahụ ga-enwerịrị ike karịa ngwaahịa a. Ka e wee nwee ike dee usoro kemịkal nke ihe a niile, ọ dị mkpa ịgbaso iwu nke nchekwa ihe. Nke ahụ bụ, njikọ kemịkal ga-enwerịrị ozi gbasara ọnọdụ anụ ahụ nke ndị na-emeghachi omume na ngwaahịa. A maara nke a dị ka nchịkọta nchịkọta
Ikwesiri iburu n'uche nke ahụ bekee ndị dị ọcha nwere enthalpy nke guzobere hà efu. A na-enweta ụkpụrụ ndị a na-asọ oyi n'okpuru ọnọdụ dị iche iche, dị ka ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu, na n'ụdị ha kachasị kwụsie ike. N'ime sistemụ kemịkal ebe enwere ndị na - emeghachi ihe na ngwaahịa, nsonaazụ nke mmeghachi omume na nha anya nke nhazi site na ọnọdụ ọkọlọtọ.
Anyị maara na ọnụọgụ nke usoro ụfọdụ sitere na ogige kemịkal na kemịkal sitere na ọnọdụ ikuku 1 nke nrụgide na ogo 25 nke okpomọkụ.
Enthalpy nke mmeghachi omume
Anyị ekwuolarị ihe ọdịdị mmalite bụ. Ugbu a, anyị ga-akọwa ihe mkpali mmeghachi omume bụ. Ọ bụ ọrụ thermodynamic na-enyere aka gbakọọ okpomoku a rụpụtara ma ọ bụ okpomoku nke anapụtara n’oge kemịkal. A na-achọ nguzozi onye nkụzi, na-anọgide ma ọ bụ na-anata ma ndị reagents na ngwaahịa ndị ahụ. Otu n'ime akụkụ ndị a ghaghị imezu iji gbakọọ ihe mmeghachi omume bụ na mmeghachi omume n'onwe ya ga-emerịrị na nrụgide mgbe niile. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'oge niile ọ ga - ewe maka mmeghachi omume kemịkal, a ga - edobe nrụgide ahụ mgbe niile.
Anyị maara na enthalpy nwere akụkụ nke ike yana ọ bụ ya mere eji atụ ya na joules. Iji ghọta mmekọrịta nke enthalpy na okpomọkụ nke gbanwere n'oge mmeghachi omume kemịkal ọ dị mkpa ịga iwu mbụ nke thermodynamics. Ma ọ bụ na iwu mbụ a na-agwa anyị na ọkụ a gbanwere na usoro thermodynamic bụ nha ngbanwe nke ike dị n'ime nke ihe ma ọ bụ ihe ndị metụtara ọrụ ahụ gbakwunyere ọrụ nke ihe ndị ahụ kwuru n'oge usoro ahụ.
Anyị maara na mmeghachi omume kemịkal bụ ihe karịrị usoro nrụzugharị dị iche iche nke na - eme na nrụgide ụfọdụ. A na-enye ụkpụrụ nrụgide ndị a na-ahụkarị n'okpuru ọnọdụ ọkọlọtọ nke ikuku ikuku. Ya mere, a na-akpọ usoro thermodynamic niile nke na-eme n'ụzọ a isobaric, ebe ọ na-apụta na nrụgide mgbe niile.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịkpọ oku na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, ọ ga-edo anya na ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka okpomọkụ, mana mgbanwe okpomọkụ. Nke ahụ bụ, ọ bụghị okpomọkụ nwere ike ịkụzi ihe ma ọ bụ okpomoku nke ndị na-eme na ngwaahịa nwere. Ọ bụ okpomoku a gbanwere n'ime usoro mmeghachi omume kemịkal.
Mmekọrịta na okpomọkụ
N'adịghị ka ihe anyị kwurula na mbụ, enthalpy bụ ọrụ steeti. Mgbe anyị gbakọọ mgbanwe enthalpy, anyị na-agbakọ ọdịiche nke ọrụ abụọ. Ọrụ ndị a na-adaberekarị na steeti usoro. Ọnọdụ usoro a dịgasị iche dabere na ike dị n'ime na olu nke usoro ahụ n'onwe ya. Ebe ọ bụ na anyị maara na mbipute ahụ na-adịgide adịgide n'oge mmeghachi omume kemịkal, mmeghari nke mmeghachi omume abụghị ihe ọ bụla karịa ọrụ steeti nke dabere na ma ike dị n'ime na olu.
Yabụ, anyị nwere ike ịkọwa ọnụọgụ nke ndị na-emegharị ahụ na mmeghachi omume kemịkalụ dịka ngụkọta nke onye ọ bụla n'ime ha. N'aka nke ọzọ, anyị na-akọwa otu ihe ahụ mana na ngwaahịa ndị ahụ dị ka mkpokọta nke enthalpy nke ngwaahịa niile.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere enthalpy na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Enthalpy
Oke Osimiri Pasifik